Sheekadii Jaceyl ee Farmaajo Iyo Kheyre Oo Gagabo ah | Xaqiiqonews
Sheekadii Jaceyl ee Farmaajo Iyo Kheyre Oo Gagabo ah
Qisadii Jaceyl ee Dhaxmareysay Farmaajo iyo Kheyre waxa ay soo gaartay gagabo, inkastoo wili “Jaceylka” uusan dhamaan, hase ahaate waayaha ayaa ku dhaw in xiriirkii ay u badalaan “mid dhamaaday”.
Ilaa daqiiqadihii ugu dambeeyey, Madaxweyne Farmaajo ayaa ku dhaganaa xiriirka fiican ee uu lahaa Kheyre, waana kanaa maanta Farmaajo oo isku diyaarinaayo in uu iska iloowo sheekadii jaceyl ee kala dhaxeysay mr Kheyre.
Kheyre ayaa soo qaatay xiriir “xididnimo” oo heers sare ah, waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu xasuusan doono waxaa ka mid ah sida anshaxa leh ee uu u dhowray dhaqanka soomaalida ee dhiirigelinaaya ilaalinta xididka.
Haddiise Farmaajo wax laga weydiiyo khibradiisa xagga siyaasadda waxa ay ila tahay in uu Kheyre ku sifeyn lahaa “Ra’iisal wasaare ruuxi ah”.
-Awr Safar In yar ayey Xariirsantahay
Sheeko walbo dhamaad ayey leedahay, warqad walbana labo dhinac ayey leedahay, waxa ila tahay waxaa la joogaa waqtigii ay is macsalaameyn lahaayeen Kheyre iyo Farmaajo, howsha ayaa hadda u eg sida ay na leedahay “Nin walboo naftaada”.
Mushkiladda ugu badan waxa ay hortaagan tahay taageerayaasha “nabad iyo nolol” kuwaasi oo caqbadda ugu weyn ee heysata ay tahay in kala doortaan Farmaajo iyo Kheyre, waxaana gabi ahaanba meesha ka baxay daladdii lagu mideysnaa ee “nabad iyo nolol”.